ချစ်သူကောင်မလေးရဲ့အခန်း မြင်ပြီးနောက် လမ်းခွဲလိုက်တဲ့ အမျိုးသား -
ချစ်သူကောင်မလေးရဲ့အခန်း မြင်ပြီးနောက် လမ်းခွဲလိုက်တဲ့ အမျိုးသား
အရမ်းချစ်ကြတဲ့ စုံတွဲလေးတွေ သတိထားသင့်တဲ့ သတင်းလေးကို တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်မှာရှိတဲ့ ၃နှစ်ကြာတွဲခဲ့တဲ့ စုံတွဲလေးအကြောင်းပါ။ဖြစ်ပုံကလည်းဆန်းတာလှပါဘိ။
ထိုင်ဝမ်မှာရှိတဲ့ အင်တာနက်သုံးစွဲသူတွေကြားပျံ့နှံ့နေတဲ့ သတင်းအရ ထိုင်ဝမ်အမျိုးသားတစ်ယောက်က သူချစ်ရတဲ့ မိန်းကလေးပြောခဲ့တဲ့ ကတိကိုအမြဲနားလည်း လက်ခံစောင့်ထိန်းခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ကတိစကားကတော့ “ငါ့အခန်းကိုမဝင်နဲ့”လို့မိန်းကလေးက တောင်းဆိုထားတာပါ။ယောက်ျားလေးကလည်း ကတိတည်တဲ့အနေနဲ့ ဘယ်တော့မှာ မိန်းကလေးအခန်းထဲ မဝင်ခဲ့ပါဘူး။
အဲ့လိုနဲ့တွဲလာတာ ၃နှစ်ကြာချစ်ခရီးလမ်းကို ဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးပါပြီ။မိန်းကလေးတောင်းဆိုတဲ့ ကတိကလည်း သူတို့ချစ်စုံတွဲ သက်တမ်းတလျှောက် တစ်ခုတည်းသော စည်းမျဉ်းတစ်ခုပါ။
တစ်နေ့မှာတော့…ယောက်ျားလေးဖြစ်သူက သူ့ချစ်သူမိန်းကလေးရှိရာ အိမ်သို့အလည်သွားချိန်မှာပဲ သူတို့ချစ်ခရီးလမ်း အဆုံးသတ်ခဲ့ရပါတယ်။
အဲ့နေ့က သူရောက်နေချိန်မှာ သူ့ချစ်သူမိန်းကလေးက ရေချိုးနေချိန်ပါ၊အဲ့အချိန်မှာ ချစ်သူမိန်းကလေးအမေက သူ့ကို အကူအညီ တစ်ခုတောင်းပါတယ်။
အဲ့တာကတော့ ချစ်သူမိန်းကလေးဝတ်ဖို့အဝတ်အသစ်တစ်ထည် အခန်းထဲကနေ သွားယူပေးပါလို့ ဆိုလိုက်တာပါ။
သူ့စိတ်ထဲမှတော့ ဒါဟာတစ်ခုခုကိုဖန်တီးနေတယ်လို့ ခံစားရသလို ပျော်ရွှင်နေမိတယ်လေ။သူ့ပျော်ရွှင်မှုတွေ ရပ်တန့်သွားပါတယ်။သူ့ချစ်သူမိန်းကလေးအခန်းထဲ ကမြင်ကွင်းကိုမြင်လိုက်ရလို့ပါ။
ညစ်ပတ်နေတဲ့အဝတ်အစားတွေ၊ရှုပ်ပွနေတဲ့ အခန်းတွင်းပစ္စည်းတွေ၊အမှိုက်တွေအပြင် တစ်ကိုယ်ရည်သုံးအမျိုးသမီးအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေကနေရာအနှံ့မှာရှိနေသလို ခြေချလို့တောင်မရပါဘူး၊
သူပြေးထွက်လာမှုကို ချစ်သူမိန်းကလေးတွေ့လိုက်ချိန်မှာတော့ စည်းမျဉ်းက ချိုးဖောက်သွားပါပြီး၊စည်းမျဉ်းချိုးဖောက်မှုနောက်မှာတော့ ၃နှစ်ကြာချစ်ခရီးလမ်းလည်း ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာ ဇာတ်သိမ်း အဆုံးသတ်ခဲ့ပါပြီ။crd
ဒီအဖြစ်အပျက်လေးဟာ ၁နှစ်ခန့်ရှိလောက်ပြီဆိုပေမယ့် မိန်းကလေးတွေအနေဖြင့် လိုက်နာသင့်တဲ့ အချက် ၂ချက်ကို သိရှိစေဖို့ ဖေါ်ပြလိုက်ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
၁။ ချစ်သူကောင်လေးကို အိမ်မခေါ်ပါနဲ့။
၂။ အိမ်ကို ခေါ်မိရင်လည်း အခန်းတံခါး သော့ ၂ထပ်ခန့် ခတ်ထားပါ . . . .လို့ စေတနာဖြင့် သတိပေးစကားဆိုလိုက်ပါတယ်နော်။
Source: Asia Mail
အရမ်းခ်စ်ကြတဲ့ စုံတြဲလေးတြေ သတိထားသင့္တဲ့ သတင်းလေးကို တင်ျပေပးလိုက္ပါတယ်။ထိုင်ဝမ္မွာရွိတဲ့ ၃နွစ်ကြာတြဲခဲ့တဲ့ စုံတြဲလေးအေကြာင်းပါ။ျဖစ္ပုံကလည်းဆန်းတာလွပါဘိ။
ထိုင်ဝမ္မွာရွိတဲ့ အင္တာနက်သုံးစြဲသူတြေကြားပ်ံ့နွံ့နေတဲ့ သတင်းအရ ထိုင်ဝမ်အမ်ိုးသားတစ်ယောက္က သူခ်စ်ရတဲ့ မိန်းကေလျးေပာခဲ့တဲ့ ကတိကိုအမြဲနားလည်း လက္ခံစောင့္ထိန်းခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ကတိစကားကေတာ့ “ငါ့အခန်းကိုမဝင္နဲ့”လို့မိန်းကေလးက တောင်းဆိုထားတာပါ။ယောက်ားလေးကလည်း ကတိတည္တဲ့အေနနဲ့ ဘယ်တော့မွာ မိန်းကေလးအခန်းထဲ မဝင္ခဲ့ပါဘူး။
အဲ့လိုနဲ့တြဲလာတာ ၃နွစ်ကြာခ်စ္ခရီးလမ်းကျိုဖတ်သန်းခဲ့ပြီးပါပြီ။မိန်းကေလးတောင်းဆိုတဲ့ ကတိကလည်း သူတို့ခ်စ္စုံတြဲ သက္တမ်းတေလွ်ာက် တစ္ခုတည်းသော စည်းမ်ဉ်းတစ္ခုပါ။
တစ်နေ့မွာတော့…ယောက်ားလေျးဖစ်သူက သူ့ခ်စ်သူမိန်းကေလးရွိရာ အိမ်သို့အလည်ြသားခ်ိန္မွာပဲ သူတို့ခ်စ္ခရီးလမ်း အဆုံးသတ္ခဲ့ရပါတယ်။
အဲ့နေ့က သူရောက်နေခ်ိန္မွာ သူ့ခ်စ်သူမိန်းကေလးက ရေခ်ိုးနေခ်ိန္ပါ၊အဲ့အခ်ိန္မွာ ခ်စ်သူမိန်းကေလးအေမက သူ့ကို အကူအညီ တစ္ခုတောင်းပါတယ်။
အဲ့တာကေတာ့ ခ်စ်သူမိန်းကေလးဝတ္ဖို့အဝတ်အသစ္တစ္ထည် အခန်းထဲကေန သြားယူပေးပါလို့ ဆိုလိုက္တာပါ။
သူ့စိတ္ထဲမွေတာ့ ဒါဟာတစ္ခုခုကိုဖန္တီးနေတယ္လို့ ခံစားရသလို ပေ်ာ်ရွှင်နေမိတယ်လေ။သူ့ပေ်ာ်ရွှင္မှုတြေ ရပ္တန့်သြားပါတယ်။သူ့ခ်စ်သူမိန်းကေလးအခန်းထဲ ကျမင္ကြင်းကျိုမင္လိုက်ရလို့ပါ။
ညစ္ပတ်နေတဲ့အဝတ်အစားတြေ၊ရှုပြေ္ပနတဲ့ အခန်းတြင်းပစ္စည်းတြေ၊အမှိုက်တြေအျပင် တစ္ကိုယ်ရည်သုံးအမ်ိုးသမီးအသုံးအေဆာင္ပစ္စည်းတြေကေနရာအနွံ့မွာရွိနေသလိုျေခခ်လို့တောင္မရပါဘူး၊
သျူေပးထြက္လာမှုကို ခ်စ်သူမိန်းကေလးတြေ့လိုက္ခ်ိန္မွာတော့ စည်းမ်ဉ်းက ခ်ိုးဖောက်ြသားပါပြီး၊စည်းမ်ဉ်းခ်ိုးဖောက္မှုနောက္မွာတော့ ၃နွစ်ကြာခ်စ္ခရီးလမ်းလည်း ဝမ်းနည်းဖြယ်ရာ ဇာတ်သိမ်း အဆုံးသတ္ခဲ့ပါပြီ။crd
ဒီအျဖစ်အပ်က်လေးဟာ ၁နွစ္ခန့်ရွိလောက်ျပီဆိုပေမယ့် မိန်းကေလးတြေအေနျဖင့် လိုက္နာသင့်တဲ့ အခ်က် ၂ခ်က္ကို သိရွိစေဖို့ ဖေါ်ျပလိုက်ရျခင်ျးဖစ္ပါတယ်။
၁။ ခ်စ်သူကောင်လေးကို အိမ္မေခ္ပါါနဲ့။
၂။ အိမ္ကို ခ္မေါိရင္လည်း အခန်းတံခါး သော့ ၂ထပ္ခန့် ခတ္ထားပါ . . . .လို့ စေတနျာဖင့် သတိပေးစကားဆိုလိုက္ပါတယ်နော်။
This Year : 100632
Total Users : 395765